Iindaba -Ungakhetha njani umatshini wokukhusela ibhlokhi ngokuthe ngqo?
Ungayikhetha njani into yokupholisa ibhloko yomatshini wokupholisa ngokuthe ngqo?
Block umatshini ice ngumenzi ice, yahlulwe okupholisa ngqo ibhloko umatshini ice kunye ityuwa amanzi ibhloko umatshini ice. Iibhloko zomkhenkce ezivelisiweyo zinobungakanani obukhulu phakathi kweemveliso zomkhenkce. Ibloko lomkhenkce likhulu ngobukhulu, kubushushu obuphantsi, akukho lula ukunyibilika, kulula ukuhambisa, kunye nexesha lokugcina ixesha elide. Inendima engenakuguqulwa kwiindawo ezinobushushu obuphezulu. Inokutyunyuzwa kwiindidi ezahlukeneyo zomkhenkce ngokweemfuno ezahlukeneyo, kwaye ilungele ukwenziwa kokutya, imveliso yokuloba, ukupholisa kunye nokulondolozwa, ukuthengiswa kwevenkile enkulu, umkhenkce odliwayo, amazibuko kunye namazibuko, ukuloba ulwandle, njl.
Ukupholisa ngqo ibhloko umatshini ice isebenzisa umgaqo ice ukuba ifriji engena ngqo kwi-evaporator kunye namanzi ukutshintshiselana ubushushu. Ikhawuleza ibe ngumphunga kwaye yenze umkhenkce. Akukho siphakathi sokudlulisa ubushushu esiphakathi, esithintela ilahleko yamandla ebangelwa kukusetyenziswa kwefriji yokutshintshisa ubushushu. Yizisele ukusebenza ngendlela engazange ibonwe. Yandisa kakhulu ukusebenza kobushushu. Ukuqhutywa kwe-aluminium thermal ngamaxesha e-3.2 kunesinyithi, ubunzima bayo yi-1/3 yentsimbi kuphela, kwaye ayizukurusa. Emva kovavanyo oluninzi, inokugcina amandla angaphezu kwe-30% kunamatshini wokwenza umkhenkce wemveli Kwaye ngenxa yokuba kungekho ndlela iphakathi yokupholisa njengamanzi anetyuwa efunekayo, inkqubo yokwenza umkhenkce ayinangcoliseko. Phantsi kwengqikelelo yokuba unikezelo lwamanzi lufikelela emanzini okusela, umkhenkce unokuhlangabezana neemfuno ezisemgangathweni ezidliwayo, ugqitha kwisikali esikhulu Ingxaki yokuba ityhubhu yomkhenkce ayinakutyiwa.
Uqwalaselo lweendawo eziphambili zokupholisa ngokuthe ngqo kumatshini weqhwa lomkhenkce:
Isiguquli: Ngokwemodeli kunye nokuphuma, ii-compressors ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeRefcomp, iBitzer kunye neHanbell zinokukhethwa;
I-Condenser: amanzi apholileyo, amanzi apholileyo, okanye amanzi aphefumlayo;
Evaporator: I-evaporator yenziwe ngealuminium alloy, kwaye umphunga utshintsha ubushushu ngamanzi, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukusetyenziswa kwamandla;
Ukwandiswa kwevalvevu: Uphawu lweDanfoss;
Ungayikhetha njani into yokupholisa ibhloko yomatshini wokupholisa ngokuthe ngqo? Baninzi abavelisi boomatshini bokwenza umkhenkce opholileyo ngokuthe ngqo kwimarike, enemigangatho eyahlukeneyo, ethe yamangalisa wonke umntu. Nazi ezinye zeengcebiso zesalathiso sakho.
1. Vimba ukukhetha umkhenkce: Kuyacetyiswa ukuba kukhethwe ubungakanani obulinganayo njengamaqhekeza omkhenkce athengiswa kwalapha ekhaya.
Uqwalaselo 2: loomatshini:ubukhulu becala ixhotyiswe ngeicompressors, condensers, izixhobo zefriji, izixhobo zombane zolawulo. Nangona amaxabiso ezinto ezaziwayo zorhwebo ngokubanzi ephezulu, kodwa amakhulu amawaka ezixhobo akufuneki agcinwe okanye hayi, kulula ukuyisebenzisa, uzinzo sisizathu esinzima.
3. Evaporator:Isitya sealuminium evaporator ngokubanzi siveliswa ngumenzi. Inkqubo yokuvelisa, ukulondolozwa kobushushu, inkqubo yokuphakamisa, kunye nolwakhiwo, kuphela emva kokuqonda ngakumbi, khetha oko wanelisekileyo kuko.
4. Intsebenzo: Ukusebenza kwephakheji yezixhobo, inqanaba lokuzenzekelayo kwezixhobo, kuba uninzi lweempawu zoomatshini bokupholisa ibhlokhi ngokuthe ngqo zizandla kwiindawo ezininzi, ke ezo ezizenzekelayo kufuneka zibengcono, ukwenziwa kwenkqubo yolawulo, ukusebenziseka lula , wonke umntu Unokufunda ngakumbi.
5. Uhlolo lomhlaba: Kuthiwa ayinamsebenzi, amakhulu amawaka ezixhobo, kubalulekile ukuba uye kumzi-mveliso we-Snowman ujonge.